फाइभजी : हामीलाई घरमा पनि यसको आवश्यकता किन ? - sailungonline
२७ पुष २०७७, सोमबार १९:०५ । काठमाडाैं
स्मार्टफोन्सका लागि फाइभजीको उपयोगितामा कसैको शायदै दूई मत होला । तर, वाईफाई उपलब्ध हाम्रा घरमा यसको आवश्यकताका बारेमा कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? विस्तारै वाईफाई पूरानो प्रविधिका रुपमा स्थापित हुँदैछ । भविस्यको स्मार्ट होम्सका लागि यो अपर्याप्त हुने सम्भावना प्रबल छ । हो, यही अवस्थामा फाइभजीको आवश्यकता पर्छ । मोबाइल प्रयोगका लागि झैँ फाइभजी प्रविधिको आवश्यकता भविस्यको घरका लागि कसरी पर्नेछ भन्ने बारे संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयाश गरिएको छ ।
धेरैले स्मार्ट होम लाइफस्टाइल अझै टाढाको कुरा हो भन्ने सोच्न सक्छन् । तर, ओपोले यस्तै विभिन्न सम्भावनालाई यथार्थमा परिनत गर्ने कार्यमा सफलता हात पारिसकेको छ । केही समय अगाडी ओपोले रेनो फाइभजी केन्द्रित विश्वकै पहिलो फाइभजीद्वारा सञ्चारित स्मार्ट होटलको निर्माण गरिसकेको छ । ओपो फाइभजी होटले ६ महिनासम्म अष्ट्रेलियाका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्दै यसका पाहुनालाई फाइभजी यूगको स्मार्ट लिभिङ अनुभव प्रदान गरिसकेको छ । फाइभजी होटलमा ओपो रेनो फाइभजी मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त नवप्रबर्तनात्मक तथा रोचक फाइभजी स्मार्ट होम उपकरणहरु उपलब्ध गरिएको थियो । पाहुनाहरुले भ्वाइस कमाण्ड मार्फत नै प्रकाश तथा ब्याकग्राउण्ड म्यूजिक नियन्त्रण गर्न सक्थे । त्यसैगरी, एआर वारड्रोब मार्फत विभिन्न आउटफिट ट्राइ गर्नुका साथै, फाइभजी कनेक्टिभिटी मार्फत विना बफरिङ नेटफ्लिक्सपनि हेरेका थिए । ओपोको फाइभजी होटलले फाइभजी ईन्टरनेट अफ एक्स्पेरियन्स वास्तवमा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव प्रदान गर्नुका साथै, भविस्यको स्मार्ट लिभिङ कस्तो हुन्छ भन्ने झल्को दिएको थियो ।